Maxaa Ka Jiro In Ciidanka Xooga Somalia Ay La Wareegeen Degano Hoostaga Jubbaland ?
September 30, 2018 M.Jo 0
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa Daraawiishta Jubbaland ayaa hawlgal ay ka sameeyeen gobolka Jubbada Hoose Waxaana ay kula Wareegeen degaano hoostaga degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayeen Al Shabaab. Hawlgaladan ayaa la sheegay in ay bilawdeen saaka aroortii hore kadib marii ciidamadu weerar qorsheysan ay ku qaadeen degaanna ku teetsan degmada Jamaame, iyagoo gacanta ku dhigey dhammaan degaannada hoosyimada degmadaasi. Degaanada ay ciidamadu la wareegen waxaa ka mid ah Bangiini, Maana muufo iyo Koban oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo ah la taliyaha madaxweynaha Jubbaland ee dhanka ammaanka ayaa sharaxaad ka bixiyay hawlgalada ciidamadu ay ka fuliyeen degaanadaasi. “Hadda Ciidanka Waxa ay Gaareen Maa Baar-sanguuni wuu ka tagay, hawlgalkaasi gurmadkiisa iyo u diyaar garowgiisii iyo ciidankii horaydaasi jira hada waxay soo gaaraan u gurmashadooda ka mid bay ahayd, hadana wax khasaare ah 2 will oo dhaawac ayaa naloo sheegay, iyagana 5 qof ayaa laga dilay mooto ay wateen waa laga qabsaday, hoobiyeyaal in ay soo ridayeen baa la ii sheegay”. ayuu yiri Yuusuf Dhuumal. Al Shabaab [Sii aqri]
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Magacaabay Guddi Cusub
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa u magacaabay Mudane Cabdullaahi Xirsi Diirshe Ku-simaha Guddoomiyaha Guddiga Xallinta Khilaafaadka Dhulka iyo Guryaha ee Gobolka Banaadir. Eng.Yarisow ayaa kula dardaarmay Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Xallinta Khilaafaadka Dhulka iyo Guryaha in uu si deg deg ah dib u habayn ugu sameeyo xubnaha iyo shaqada guddigaas oo lafdhabar u ah caddaalad iyo sinnaan loo horseedo shacabka tabashada qaba. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo dagaalka lagula jiro musuq maasuqa iyo dokumiintiyada been abuurka ah ee lagu qaato hantida dadka. Guddoomiyaha ayaa faray dhammaan xubnaha Guddiiga Xallinta Khilaafaadka Dhulka iyo Guryaha ee Gobolka Banaadir in ay dardar geliyaan hawlaha loo igmaday, si loo xalliyo tabashooyinka la soo gaarsiiyey Gobolka Banaadir ee la xiriira dhulalka iyo guryaha.
AKHRISO:Maxaa Ka Jiro In Xasan Shiiq uu Hagoomin Doono Xisbi Siyaasi Oo Cusub
Xisbi la magac baxay Midowga Nabadda iyo Dimoqraadiyadda (UPD) ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo, kaasoo uu hoggaamiye u noqon doono Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sida wararku sheegayaan Xisbigan ayaa waxaa ku midoobi doono Xisbigii Daljir, Kutlada Horusocod, PDP iyo Siyaasiyiin kale, waxaana xubnaha ugu firfircoon Xisbigan ka tirsan yihiin Baarlamaanka Labada Aqal. Xisbigan ayaa durba la shaaciyay Astaanta ama Logada uu yeelanayo, iyadoo shirweyne Xisbiga uu isugu imaan doono lagu ansixinayo Dastuurka Xisbiga. Wararka ayaa sheegaya in Munaasabad weyn oo lagu shaacinayo Xisbiga ay ka dhici doonto magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ee soo socota. Sidoo Kale Shirkii ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho Xisbiga Daljir ayaa waxay ku shaaciyeen inay si rasmi ah ugu biirayaan midow Xisbiyo Qaran oo hal xisbi isku noqonaya, iyadoo dhaqan galkiisa uu bilaabayo maanta oo 30-ka bisha September ah. Shirar ka socday gudaha dalka iyo dibadiisa ayaa lagu heshiiyay inay hal xisbi ku midoobaan Xubno siyaasiyiin iyo Xildhibaano mucaarad ah, waxaana Xisbigan la filayaa inuu noqdo xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ku midoobaan.
Xildhibaan Sakariya Oo Ka Hadley Wax Badelka Xeer Hoosaadka Barlamaanka
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ugu baaqay Xildhibaanada inay ka feejignaadaan wax ka bedelka Xeer Hoosaadka Baarlamaanka oo la doonayo in meelo gaar laga bedelo. Xildhibaan Zakariye ayaa sheegay in xeer hoosaadka uu yahay meelaha Baarlamaanka ka dhaq dhaqaaqo, isagoo xusay in toos loo bartilmaameedsanayo xasaanadda Xildhibaanada. “Annagu wax waa garan karnaa, dad iskool galay nahay oo jaamacado ka baxay, dad wax badan shaqeynayay baa nahay, xeer hoosaadkan waa bartilmaameed waxaa la abaaray meelaha baarlamaanka ka dhaq dhaqaaqo, hadaad idinka garan weydaan hadaad iska mootisaan, aniga qof ayaa ka ahay, xasaanadii Baarlamaanka waxaa la geliyay calaamad su’aal. Waxaa uu sheegay in meelaha Baarlamaanka ka dhaqaaqayo la bartilmaameedsanayo sida qodobka 68aad ee Mooshinka ah, isla markaana la doonayo in awooddii Baarlamaanka hoos loo dhigo. Xildhibaan Zakariye ayaa ugu baaqay Guddiga Xeer Hoosaadka inay dib u celiyaan dhammaan documentiga xeer hoosaadka, isla markaana loogu tala galay in laga bedelo meelo gaar ah oo aan loogu tala gelin in nuxurka wax laga bedelo. Qodobada Xeer Hoosaadka ayaa ah awoodaha Xildhibaanada, marka laga [Sii aqri]
Wasiirka Amniga Jubbaland”Amniga Dalka Waxaa Uga Mihiimsan Ka Hadalka Facebook Iyo Igu Sawir”
Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Janan ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in aanay waxba kala socon xaalada ammaan ee uu dalka ku sugan Yahay C/rashiid Janan ayaa sheegay in dowladdu aanay ka warqabin ciidamada Soomaaliyeed ee maalin kasta dagaalka ku jira, isagoo soo hadal qaaday Ciidamo lagu dilay Gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose oo Shabaabka qaraxyo ku dileen Waxaa uu sheegay in dowladdu ay ku mashquulsan tahay kaliya baraha bulshada iyo dadka qoraalada ku soo qora Facebook ee buun buuniya. “Ciidamada Soomaaliyeed ee maalin kasta dagaal galaayo ee aan laga war qabin oo laga jecel yahay kaliya 10 qof ama 20 qof qoraal ay Facebook soo dhigaan in la buun-buuniyo, halkaas”ayuu yiri C/rashiid Janan. Sidoo kale waxaa uu sheegay dowladda Soomaaliyeed aanay xilligan la socon waxa ka socda dalka sida kan wax dilay iyo kan la dilay, kaliyana ku mashquulsan tahay baraha bulshada. Ugu danbeeyntii Khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sii xoogeystay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii maamul goboleedyada shir ku yeesheen Kismaayo, waxaana soo baxaya hadalo kulul [Sii aqri]
Haweenay lagu dilay Gaalkacyo
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi kooxo hubeysan ay ku dileen Haweenay ka mid aheyd dadka Magaalada Gaalkacyo. Dilka haweeneyda ayaa loo adeegsaday Toorey sidda ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka degaanka. Kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in ay doonaayeen in ay ka dhacaan teleefankeda gacanta, waxaana la sheegay in muran ka dib in ay dhaawac culus ay gaarsiiyeen haweenayda. Haweenayda ayaa la sheegay in loo cararay Isbitaalka Guud ee Gaalkacyo,halkaasi oo ay ugu dambeyntii ku geeriyootay. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa Magaalada Gaalkacyo, waxaa kusoo batay kooxo hubeysan oo burcad ah kuwaasoo dilalka u geysta Shacabka kunool Magaalada Gaalkacyo.
Faahfaahin Iska horimaad ka dhacay Garowe
September 29, 2018 M.Jo 0
Hal qof ayaa ku dhintay labo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib Iska horimaadka Magaalada Garowe ku dhexmaray Ciidamada Puntland iyo Kooxo burcad ah. Taliyaha xasilinta gobolka Nugaal, Gen. Muxyadiin Axmed Muuse, ayaa sheegay ciidamada amniga iyo dabley hubaysan oo ka ganacsada maandooriyaha uu dagaal dhexmaray kadib markii Ciidamada Ammaanka ay weerareen. Taliyaha ayaa sheegay iska hor imaadkaan inuu ka dambeeyay kadib markii ciidamadu ammaanku ay qaadeen howgal ka dhan ah Maandooriyaha. Waxaa uu xusay inay iska caabin kala kulmeen koox maandooriyaha ka ganacsada oo ay ciidamadu doonayeen inay gacanta kusoo dhigaan. Gen. Muxyadiin Axmed Muuse ayaa tilmaamay iska hor imaadkaan inay ku dhimatay qof dumar ah oo ay haleeshay rasaasta la isweydaarsanayay, sidoo kale ay ku dhaawacmeen labo kamid ah ciidamada amniga ee howgalka qaaday.
Ciidamada NISA Oo Gacanta Ku Soo Dhigay Khabiir Dhanka Qaraxyada oo ka tirsan Al-Shabaab
September 28, 2018 F.G 0
.Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa howl gal qorsheysan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ay ku soo qabteen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sida lagu baahiyay barta Twitter-ka ee NISA waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu soo qabtay khabiir dhanka Qaraxyada ah oo Al-Shabaab ka tirsan. Howlgalka ayaa la sheegay inuu si taxadar leh loo sii qorsheeyay, isla markaana uu qaatay muddo saacado ah, habeenimadii 27 September. Hey’adda NISA ayaa howlgalada gaarka ee qarsoodiga ah waxay muddooyinkii u dambeeyay ku shaacinaysay barta Twitter-ka, iyadoo aan faah faahin kale oo dheeraad ah laga bixin. NISA@HSNQ_NISA Howgal saacada qaatay oo si taxadar leh loosii qorsheeyay, kana dhacay agagaarka X-koontarool Mogadishu, ayaa lagu soo qabtay xubin AS oo ahaa Khabiir dhanka qaraxyada, habeynimada 27-ka Sabtember. Howlgalka cidi wax kuma noqon. Nagu garab istaag ka hortaga cadowga.
Hawlgal Ciidan Oo Lagu Soo Qabtay Xubno Ka Tirsan Al Shabaab
Ciidamada Millatariga ee ku sugan gobolka Gedo waxa ay sameeyeen hawlgal lagu soo qabtay xubno ka tirsan ururka Al Shabaab, sida ay sheegeen masuuliyiinta gobolkaasi. Hawlgalkan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii shalay gelinkii dambe maqaaxi ku taalla degmada Ceelwaaq lagu weeraray qaraxyo, halkaasi oo ay ku dhinteen dad shacab ah, islamarkaana kuwa kale ay ku dhaawacmeen. Madaxa amniga gobolka Gedo Bile Wuufood Ibraahim ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al Shabaab, hadana lagu hayo baaritaano dheeraad ah, si sharciga loo horgeeyo. “Hawlgalkaas si wanaagsan ayuu ku dhacay, ciidamada waxay soo qabteen xubno ka tirsan Al Shabaab, baaris ayaan ku wadnaa, shacabka ayay dhibaato ku hayeen, nimankan cadowga ah mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah”. Ayuu yiri Bile Wuufood.
Diyaarad xamuul ayaa ku dhacday badda dalka Micronesia, sida ay sheegeen masuuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Chuuk International Airport. Sawirro laga qaaday ayaa muujinaya diyaaradda shirkadda Air Niugini oo ku jirta biyaha badda, diyaaradaas waxaa laga leeyahay dalka Papua New Guinea. Soddon iyo shan ruux oo rakaab ahayd iyo 12 ruux oo ka shaqaynaysay diyaaradda duulimaadka ee lambarkeedu ahaa ANG73, midkoodna dhaawac halis ah ma gaarin. Ma cadda waxa sababay in diyaaraddu dhacdo, balse baaritaan arrintaas ku saabsan ayaa si dhakhso ah loo billaabi doonaa. Diyaaradda ayaa ka dhacday qaw 160 yaardi u jira waddada ay diyaaraddu ku oroddo ee garoonka sida uu BBC-da u sheegay Jimmy Emilio oo ah agaasimaha garoonka diyaardaha ee Chuuk airport. “Xaqiiqatan hadda ma ogin waxa dhacay. Baaritaannaduna sababii Keenay ayaan bilaabi doonaa, balse hadda, garoonka ayaa billaabaya duulimaadyadii caadiga ahaa”. Diyaaradda ayaa ka duushay jasiiradda Pohnpei ee dalka Micronesia waxayna ku sii jeeday Port Moresby oo ah caasimadda dalka Papua New Guinea, waxayse ku sii hakanaysay jasiiradda Weno oo dalka Micronesia ku taalla.